Ahoana no fomba hanovana ny endri-tsoratra tsy mbola voavaky ao amin'ny Outlook
Ny fomba hanovana ny làlana tsy voamarina ao amin'ny Outlook
Ny endrika fanoratana fehezina dia afaka manova ny fomba fisehon'ny hafatra
Ny Microsoft Outlook , amin'ny alàlan'ny default, dia mampiseho hafatra tsy misy hafatra amin'ny fomba mitovy amin'ny litera mitovy amin'ny hafatra vakina afa-tsy ny fanasongadinana ny manga. Azonao atao ny manova tanteraka izany mba hahatonga ny endriky ny hafatra tsy mbola voavaky kokoa, ny loko hafa, manazava na sahy.
Manao izany ianao amin'ny fametrahana rafi-pitsipi-dàlana mba ahafahan'ny hafatra-tsy voavaky hafatra-dia misy fiantraikany amin'ny fomba fampiratan'ny programa ilay lahatsoratra. Mety ho marimaritra iraisana izany saingy ny fepetra dia voafaritra mazava.
Ahoana ny fomba fampiasana ny fomba fampiasana ny hafatra amin'ny alàlan'ny hafatra tsy voavaky
Ireo dingana ireo dia ho an'ny andrana vaovao amin'ny Outlook:
Sokafy ny menus ribonina amin'ny MS Outlook.
Tsindrio ny View Settings eo ankavia.
Mifidiana fehezanteny mandamina.
Tsindrio ny bokotra Add .
Ampiasao ny fitsipika fanoratana vaovao misy anao (mailaka tsy alefa manokana, ohatra) .
Tsindrio ny Font mba hanova ny fanoratana fonosana. Azonao atao ny misafidy izay zavatra misy ao anatin'izany, anisan'izany ny safidy maro, toy ny loko lehibe kokoa, ny fiantraikany hafa, ary ny loko miavaka.
Tsindrio OK amin'ny fàfana Font mba hiverina amin'ny varavarankely Conditioning Conditional.
Tsindrio ny fepetra eo am-baravarankely.
Ao amin'ny tabilao misimisy kokoa , misafidy ireo singa tokana izay: ary misafidiana Unread avy amin'io menio fanala. Raha tianao, dia azonao atao ny mamaritra fepetra hafa ao, saingy tsy voavaky ianao dia mila mampihatra ny fanovana vaovao amin'ny hafatra tsy navoaka rehetra.
Tsindrio OK raha hiantso ny varavarankely Conditioning Conditional.
Tsindrio OK farany farany mba hamonjena ny fitsipika ary hiverina amin'ny mailakao, izay tokony hampiharina ny fitsipika vaovao.
Microsoft Outlook 2007 sy 2003
Ireo dingana ireo dia ho an'ny Outlook 2003 sy 2007:
Ao amin'ny Outlook 2007 , hivezivezy eo amin'ny mijery View> amin'izao fotoana izao> manitsy ny fomba fijery ankehitriny ....
Raha mampiasa Outlook 2003 ianao dia fidio ny View> Miaraha amin'ny> Current View> Hanamafy ny fomba fijery ankehitriny .
Kitiho ny automatique formata .
Mifidiana Hafatra tsy voavaky .
Tsindrio ny Font.
Fidio ny safidy fanalahidy tianao.
Fomba hitadiavana ny fikandrana mailaka ao amin'ny rejisitry Windows
Ahoana ny fametrahana ny fomba fijerinao amin'ny mailaka amin'ny fanoratana ny tranonkala
Ahoana ny fametrahana ny solosaina rehetra amin'ny mailaka
Ahoana ny fandefasana rakitra ZIP amin'ny alalan'ny mailaka
Ahoana ny fomba fijery ny fampisehoana an-tsoratra ny hafatra nalefanao fotsiny
Ahoana no fomba hanokafana ireo fanakanana voasakana ao amin'ny MS Outlook
Ahoana ny fijerena tsy misy mailaka ao amin'ny Outlook Express
Ahoana no hanolorana hevitra iray ho an'ny Outlook Mail (Outlook.com)
Famerenana: Feon'ny mpihaino MF-100 eo an-tokotany
Arduino ho an'ny mpanjifany
Mampiasà fampiharana finday mba hitantana ny DVR
Tetik'asa Fanandramana momba ny fetin'ny fampisehoana an-tsokosoko
Inona no atao hoe Internet Memes ary avy aiza izy ireo?
LEGO Batman: The Cheats Videogame
Torolalana ho an'ny Memory Cards SDXC
Inona ny 'RTFM'? Inona no dikan'ny RTFM?
Ahoana ny fampidiran-tsisintany?
Ity ny iMac amin'ny 21.5-inch Lineup
Miasa amin'ny Manager Manager Set AutoCAD
Ahoana no Mamorona Macro mora ao amin'ny Microsoft Word 2010
Nahoana no misy ny famerenana amin'ny fividianana iTunes Store
Alefaso ny doka voalohany amin'ny Java ao amin'ny Unix
Ahoana no hanafenana ny hafatra henjana ao amin'ny Outlook
Ahoana ny fomba hahazoana fampahatsiahivana mampahatsiahy ao amin'ny Gmail
Torohevitra momba ny fisafidianana drafitry ny Broadband Mobile
Ny fomba fanitsiana ireo loko ireo dia mampiseho ny fametrahana ao Windows Vista
Power Saving Tips ho an'ny Batemin'ny MP3 Player